Muqdisho: Dhisme sharci darro ah oo caan ahaa oo dhulka lala simay (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Dhisme sharci darro ah oo caan ahaa oo dhulka lala simay (Sawirro)
Muqdisho – Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta awood ku burburriyey dhismayaal ganacsi oo si shacri darro ah looga dhisay meel ay laheyd dowladda Hoose ee Muqdisho, looguna talagalay in la dhigi Takaasida, kuwana taalla kazoo horjeedka Isgoyska KM4, dhinacana ku heysa Shaneemo Ecuador.
Ciidammo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo wata gaadiidka wax dumiya iyo gaadiidka xamuulka ah ee wax lagu qaado ayaa maanta burburiyay dhisme ganacsi oo weyn, kaasoo laga dhisay dhul ay laheyd dowladda Hoose.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Muungaab oo tegay goobta laga wedday howsha burburrinta ah ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in la dhisto, lana sii deganadaado dhul ay leedahay dowladda Soomaaliya, kaasoo xiiligaan dowladdu baahi u qabto.
“Maamulka gobolka Banaadir wuxuu billaabay maanta sida aad arkaysaan inuu burburiyo goobihii danta guud ee la dhistay, waayo waxaa la gaaray dowladnimo xilligii fowdada way dhammaatay,” ayuu duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab).
“Ciidamada amaanka gobolka Banaadir waxaan siinay amar lagu burburrinayo goobaha sharcidarrada ah, mana jirto cid xoog ku heysan karta dhulka dowladda ama dhul dad kale leeyihiin” ayuu sidoo kale yiri Muungaab.
“Dowladda Hoose Paakinkeedii ka hesho, dadkii dulmanaan waxooda ha helaano” ayuu sidoo kale Muugaab warbaahinta ugu sheegay goobta dhulka lala simay.
Muungaab ayaa dad kale ee haataan ku ganacsada goobaha la mid meeshii manta la burburriyey ugu baaqay iney alaabahooda ka qaataan inta aan lagu soo gaarin.
“Waxaan ugu baaqaynaa dadka kale ee dhistay goobaha danta guud ah inay ka fuqsadaan albaabahooda ka hor inta aan loo imaan, waayo goobta aan maanta burburinnay muddo ayaa loo qabtay, waana ka dhammaatay, waana la burburiyay sida aad arkaysaan,” ayuu sidoo kale yiri Muugaab.
Goobaha ganacsi ee manta la burburriyey waxey ku horyaalleen Hotel loogu yeero Bakiin, kaasoo sanadkii hore nin sheegay inuu leeyahay balse xoog looga heysto uu warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe, ninkaas oo lagu magacaabo Xaaji Yuusuf Jaamac.
Ninka haataan ku shaqeysta Hotelkaas ee ula baxay magaca Hotel Bakin ayaa horay u dhistay Paakinka Takaasida ee ay laheyd dowladda Hoose ee Muqdisho, waxaana ku yaallay ganacsiyo ay ku jireen carwooyin iyo qalabka dayactirka gaadiidka.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay sidaan oo kale dhulka la simay dhismayaal laga dhistay qeybo ka mid ah wadada laamiga ah ee dhexmarta degmada Kaaraan.
Mogadishu residents praise somali national security agency over security improvements